SULTAN ADỌỌLA AKA NA NTỊ – hoo!haa!!
SULTAN ADỌỌLA AKA NA NTỊ
Onye isi ụka Alakụba n’ala anyị gbaa gburu gburu nakwa Sultan nke Sokoto bụ Alaji Sa’ad Abubakar nke atọ adọọla ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala anyị aka na ntị ka ha ghara ikwu okwu nkwutọ megide ndi ọzọ n’ala anyị.
Sultan gwara ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha gbaa mbụ ihụ na ndi mmadụ nwetara uru dị n’ọchịchị ndi nkịtị karia iji ọnụ ha na-ekwutọ mmadụ ibe ha ma na-ekwutekwa ihe nwere ike idubanye ala anyị na nsogbu.
Alaji Abubakar kwuru ihe ndia n’isi nsoa, mgbe ndi ụka Alakụba nwere ọmụmụ ihe pụrụ iche iji kwadó onwe ha maka ebum ọnụ ha nke afọa, bụ nke ha nwere na steeti Kaduna.
Alaji Abubakar gbarụrụ ihu ma kagbue ajọ akparama agwa dị iche iche ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ala anyị na-akpagasị.
Ọ kagburu ụmụ nsogbu dị iche iche na-akpọtụgasị na steeti Kaduna ma kpọkue ndi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha kwụsị nkwutọ.
Na mbụ n’okwu nke ya, onye ode akwụkwọ ukwu nke ndi ụka Alakuba bụ Dọkịnta Khalid Abubakar kpọkuru ndi ụka Alakuba ka ha gbaa mbụ ikwalite ma guzobe isi nkuzi niile nke okpukpere Alakuba, ọ kachakwa mkpa n’ime oge ebum ọnụa. Ọ gakwara n’ihu ma kpọkue ndi ụka Alakuba ka ha mụrụ anya na nche maka ihe gbasara nchekwa akụkụ ebe obibi ha.
Previous Post: NAFDAC, laghachinu n’ọdụ ụgbọ mmiri-Osinbajọ